Iiprobiotic, ziyintoni kwaye zingazisebenzisa njani? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Iiprobiotic, ziyintoni kwaye zingazisebenzisa njani?
1 Zithini iiprobiotic?
2 Ungazisebenzisa njani iiprobiotic
3 Zithini iiprobiotic ze
4 Eyona mithombo iphambili yeeprobiotic:
5 Ukutya kunye neeprobiotic
Iiprobiotic ziphila ngamagciwane aphucula impilo yomzimba wonke. Iibhaktheriya eziluncedo zihlala emathunjini kunye nokuphucula izityalo, ukuququzelela ukufunxwa kwezondlo, ukunceda ukwetyisa kunye nokuphucula amajoni omzimba.
Ezona ziqhelekileyo zezi: acidophilic lactobacilli, casei, enterococus fecalis, faecium, bulgaric, lactis, plantarum, thermophilic streptococci, biphobacteria difibus, longus kunye neentsana.
Zimbini iindlela eziphambili zokusetyenziswa, ngokutya okuneprobiotic yendalo, enje ngeyogathi okanye i-kefir, umzekelo, enye kukusetyenziswa kwezincedisi.
Ungazisebenzisa njani iiprobiotic
Ukuxhamla kwiiprobiotic, ii-microorganisms kufuneka zisetyenziswe yonke imihla. Kwaye oku kunokwenziwa ngezongezo, ngengcebiso yezonyango, okanye ngokutya okunezinto ezityebileyo kwiibhaktiriya "ezilungileyo", ezifana neyogathi, kefir, kombucha okanye ubisi olubilisiweyo. Ngokuqhelekileyo banobomi obufutshane kwaye bafuna ukubandiswa.
Ngokufanelekileyo, kufuneka batye ubuncinci ukutya okukodwa kuluhlu ngosuku. Ngokukodwa ukuba kusetyenziswa amayeza okubulala iintsholongwane, kuba amayeza atshabalalisa iintyatyambo ezinempilo.
Zithini iiprobiotic ze
Ilawula ukuhamba kwamathumbu, ukunqanda ukuqhina kunye nokuhambisa; kuthintela izifo zamathumbu ezifana ne-colitis, isifo sikaCrohn, kunye nesifo sengqondo esishukumisayo; Iphucula ukufunxwa kwezondlo; inceda ukwetyisa kubandakanya i-lactose; kuthintela ukwanda kweentsholongwane ezimbi; yomeleza amajoni omzimba kwaye ithintele i-allergies kunye nokunganyamezelani.
Kuphononongo olupapashwe kwiphephancwadi lezenzululwazi laseMelika i-Psychiatry Research, abathathi-nxaxheba abanobuntu obungazinzanga babenexhala emva kokulandela ukutya okuninzi kwezi ntsholongwane. Oku kutyhila ukuba i-microbiota (i-flora yamathumbu) ithatha inxaxheba kunxibelelwano phakathi kwamathumbu kunye nenkqubo ye-nervous system. Xa kukho uhlobo oluthile lwengxaki kule ncoko, ulwazi oludluliselwe kwingqondo yi-serotonin (95% yale neurotransmitter yempilo-ntle iveliswa emathunjini) ifika ikwimo egqwethekileyo. Iimpawu kukungakhathali kunye nokungazinzi.
Iiprobiotic zisanciphisa ukuphefumla kakubi, ukongeza ekunciphiseni ukubakho kwemigodi kunye ne-gingivitis, ngokophando olwenziwe yiDyunivesithi yaseCatalonia, eSpain, epapashwe kwiphephancwadi lesiNgesi u-Archives of Oral Biology. Iibhaktheriya ziyamangalisa i-fungus ye-Candida albicans, ebangela usulelo lomngundo we-yeast-isilwanyana esidumileyo.
Eyona mithombo iphambili yeeprobiotic:
Iyogathi yendalo: Ngawona mthombo uphambili nolula weeprobiotic kwintengiso, kodwa kukwakho neenguqulelo ezinencasa zeyogathi ezigcina iintsholongwane eziluncedo ziphila;
I-Kefir: Ligwele kunye nemveliso ebilisiweyo yeebhakteriya efanayo neyogathi, kodwa inomxholo ophezulu weprobiotic.
Ubisi olunotyiweyo: Zizimveliso ezizodwa ezihlala ziqukethe iLactobacilli eyongezwe lushishino, iYakult yeyona idumileyo;
Kombucha: isiselo esinxilisayo esenziwe ikakhulu iti emnyama;
Iimveliso zaseMpuma esekwe kwisoya, imifuno kunye nemidumba efana neMiso, Natto, Kimchi, ezinokuthengwa kwiivenkile ezizodwa.
Izibonelelo: Iiprobiotiki zikwakhona kwiifomsile kunye neepowder. Ingcali yezempilo ingabonisa ukhetho.
Ukutya kunye neeprobiotic
Ukutya kweprobiotic kungqineke kulidlelane elihle kwabo bafuna ukunciphisa umzimba. Kungenxa yokuba ukunciphisa umzimba ngokuchanekileyo kuyafuneka ukuba amathumbu alawulwe kakuhle ukuze afunxwe ngcono izakhamzimba kunye neevithamini ngexesha lokutya.
Ukongeza, iintyatyambo ezingaqhelekanga zakha "imingxunya" apho ityhefu kunye nesinyithi esinzima zingena ekujikelezeni kwaye zivutha umzimba, zikhokelela kwisifo seswekile nezinye izifo.
Kuthetha ukuthini ukuphupha umtshato?
Kutheni le nto kufuneka ukhathazeke ngamayeza okubulala iintsholongwane ekutyeni?
Ngaba i-selenium inokuwunciphisa umngcipheko we-osteoporosis?
Iindidi zeetshokholethi kunye nezibonelelo zazo
Amashwamshwam angama-7 okutya ngaphambi kokulala okukunceda ulale